Bagan in Our Heart photo exhibition - Yangon Thu Michelle Video
Environmental, Video Sep 07, 2018
ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာက နှလုံးသာားထဲကပုဂံဓါတ်ပုံပြပွဲ (Bagan in Our Heart photo exhibition) အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တစ်ပတ်က နှစ်တစ်ရာမြန်မာ့ဖက်ရှင်ဗီဒီယိုကို ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်။ ဒီလိုဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဘယ်လိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးလဲ သိလား။ ပုဂံခေတ်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်၊ တောင်ငူခေတ်၊ ညောင်ရမ်းခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်၊ ကိုလိုနီခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးခေတ်စတဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေး ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အခုထိရှိနေတဲ့ ပုဂံကြောင့်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းခံရပြီဆို ဗီဒီယိုထဲကအတိုင်း ကောင်းကျိုးတွေရှိပါတယ်။ Bagancom ကလဲ ကြိုးစားနေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကို ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ပုဂံနဲ့ဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံလက်ရာကောင်းတွေကို ရောင်းချပြီး ရလာတဲ့ငွေကြေးကို အကျိုးအမြတ်တပြားမှမယူဘဲ အကုုန်လုံးကိုုရံပုံငွေအနေနဲ့ထားပြီး သုံးပါတယ်။ အခုလဲ မုံရွာမှာ ဓာတ်ပုံပြပွဲလုပ်နေတယ်။ စင်ကာပူမှာလဲ ဓာတ်ပုံပြပွဲကျန်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ပုဂံကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ်စာရင်းဝင်အောင် တစ်တပ်တစ်အားကူညီကြပါဆို။ မဟုတ်ရင် ဓာတ်ပုံတွေသိမ်းထား မွေးလာတဲ့မြေးမြစ်တွေအတွက် ပြဖို့ ဓာတ်ပုံပဲကျန်မယ်။
Special Thanks to နှလုံးသားထဲကပုဂံ
Bagan isasacred landscape which features an exceptional array of Buddhist art and architecture. Bagan is all our people from Myanmar’s heart. As I’mablogger, I notice that cultural traditions are national identities and we cannot let them faint. Thousand years of cultures and traditions with hundred of tribes make our country prominent around the world.
A photo exhibition is held in Mandalay, titled ‘Bagan in Our Heart’. As part of efforts to enroll Bagan in the UNESCO’s world heritage list. These exhibition planned to show in major cities of Myanmar, Mandalay and Monywa and Yangon.
The events are jointly organize by photographers, the Department of Archaeology and National Museum (Bagan branch), Metta Moe philanthropic organization and Xenon Inject Printing Co.
Photo exhibition in Mandalay is 20 through 22 September.
Bagan in our Heart